Akụkọ - Mgbe ị gụsịrị nke a, ị na -amaja ị cupụ kọfị kwa ụbọchị na iko akwụkwọ mkpuchi kpuchie PE?
Mgbe ị gụchara nke a, ị na -amaja ị cupụ kọfị kwa ụbọchị na iko akwụkwọ mkpuchi kpuchie?
Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ezigbo mmalite bụ ọkara ọgụ. Ọrụ ụtụtụ na -amalite mgbe iko kọfị na -ekpo ọkụ ... N'oge a, caffeine na -ejikọ otu ihe nnabata n'ụbụrụ, na -eme ka ụbụrụ ghara ịnata akara "ike ọgwụgwụ", yabụ na ọ na -enye ndị mmadụ nkwalite ike.
Agbanyeghị, ọmụmụ ọhụrụ ewepụtala ịdọ aka na ntị: iji iko akwụkwọ mkpofu a na-ewe ogologo oge ị drinkụ kọfị dị ọkụ ma ọ bụ ihe ọ hotụ hotụ na-ekpo ọkụ, gụnyere iri nri (ọkụ) n'ime igbe nri ehihie a na-atụfu, ga-akwụ ụgwọ ahụike.
N'ime ọmụmụ ọhụrụ e bipụtara na 'Journal of Materials Hazardous》 (IF = 9.038), ndị otu nyocha sitere na Institute of Technology India chọpụtara na kọfị na -ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe ọ hotụ otherụ ndị ọzọ na -ekpo ọkụ n'ime iko akwụkwọ mkpofu enwere n'ime nkeji iri na ise Ọtụtụ iri puku ihe nwere ike imebi a ga -ewepụta ya n'ime ihe ọverageụ ,ụ, ya bụ, ngwongwo plastik ...
Anyị niile maara micro plastik. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, site na imepụta oke na iji plastik, mkpokọta micro plastik na gburugburu ebe obibi gara n'ihu na -abawanye. Mmetọ ikuku plastik abụrụla nsogbu gburugburu ebe obibi zuru ụwa ọnụ n'akụkụ mbibi ozone, acidification mmiri, na mgbanwe ihu igwe.
Ndị ọrụ nyocha kwuru na obere plastik ndị a na -anaghị ahụ anya na -aghọ nnukwu ihe egwu nye ahụike mmadụ. Na mbido afọ a, otu ndị ọrụ nyocha nke United States chọpụtara micro plastik na akụkụ ahụ mmadụ na nke mbụ ya. Ndị mmadụ na -echegbu onwe ha na mmetọ a ga -ebute ọrịa kansa ma ọ bụ amụtaghị nwa. Nnyocha e mere egosiwo na mmetọ ikuku plastik nwere ike ibute nsị na anụmanụ.
Dọkịta Sudha Goel, ụlọ akwụkwọ nke sayensị gburugburu ebe obibi na injinịa, Institute of Technology nke India kwuru, sị: “Iko akwụkwọ juputara na kọfị dị ọkụ ma ọ bụ tii dị ọkụ ga -eweda akwa microplastic dị n'ime iko ahụ n'ime nkeji iri na ise. ga -agbada micromita 25,000 n'ogo. A na -ewepụta irighiri ihe ndị ahụ n'ime ihe ọ hotụ hotụ na -ekpo ọkụ.
A na -eme atụmatụ na n'afọ gara aga, ndị na -emepụta iko akwụkwọ na -emepụta ihe dị ka iko akwụkwọ dị ijeri 264, nke a na -eji ọtụtụ maka tii, kọfị, chocolate dị ọkụ, na ọbụna ofe. Nọmba a bụ nha akwụkwọ 35 maka onye ọ bụla nọ n'ụwa.
Mmụba na -aga n'ihu na ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ụgbọ mmiri na -ebuga n'ụwa emewokwa ka a na -achọ ngwaahịa ndị enwere ike ịtụfu. N'ime ndụ na ọrụ na -agbasiwanye ike, ịtụ inye nri abụrụla ihe ọtụtụ ndị mmadụ na -eme kwa ụbọchị. A na -atụfu igbe nri ehihie enwere ike tụfuo ozugbo ọ gwụchara, na n'ozuzu ha enweghị otu mmetụta ọjọọ na gburugburu dịka arịa plastik na styrofoam. Agbanyeghị, Sudha kwuru, nkasi obi a na -abịa n'ọnụ ahịa.
Ndị nyocha ahụ gbakwụnyere: "Micro plastik na -arụ ọrụ dị ka ndị na -ebubata mmetọ, dị ka ion, nnukwu ọla dị oke egwu dị ka palladium, chromium na cadmium, na ngwakọta ihe ọkụkụ nke bụ hydrophobic ma nwee ike banye n'ime ala anụmanụ. enwere ike imetụta mmetụta ahụike. Ọ dị oke njọ. "
Usoro dị nro maka ikewapụta kemịkal achọpụtala micro plastik n'ime mmiri ọkụ. Nke kacha enye nsogbu, nyocha ihe nkiri plastik kpughere ọnụnọ nnukwu ọla dị na lining.
Ị nwere ike ịhụ na nsonaazụ nnwale a dị n'elu bụ "ihe na -awụ akpata oyi", yabụ enwere ngwaahịa ọ bụla nwere ike dochie iko akwụkwọ mkpuchi PE?
Azịza ya bụ ee! Iko akwụkwọ EPP, Igbe nri ehihie OPB usoro, wdg. Hazie kọmpat ngwaahịa, chọpụta mmegharị akụ ma jiri plastik dị mma na gburugburu ebe obibi. Iko akwụkwọ eji eme ya nwere ike dochie iko akwụkwọ mkpuchi PE.